29 Septambra 2019 - FJKM Québec - Canada Vonona aho hanao araka ny teninao ry Avo indrindra ô!
29 Septambra 2019
28 septembre 2019 by FJKM-QUEBEC
47:1 Ary Josefa nankao amin’i Farao ka nilaza taminy hoe: Ny raiko sy ny rahalahiko ary ny ondry aman’osiny sy ny ombiny mbamin’izay rehetra ananany dia efa tonga avy tany amin’ny tany Kanana; ka, indreo, ao amin’ny tany Gosena izy.
47:2 Ary ny dimy lahy tamin’ny rahalahiny no nalainy ka nentiny teo anatrehan’i Farao.
47:3 Ary hoy i Farao tamin’ireo rahalahin’i Josefa: Inona moa no raharaha fanaonareo? Dia hoy izy tamin’i Farao: Mpiandry ondry izahay mpanomponao hatramin’ny razanay.
47:4 Ary hoy koa izy tamin’i Farao: Mba hivahiny eto amin’ity tany ity no niavianay; fa tsy misy ahitra ho an’ny ondry aman’osin’ny mpanomponao, fa mafy ny mosary any amin’ny tany Kanana; koa ankehitriny, trarantitra ianao, aoka mba honina ao amin’ny tany Gosena ny mpanomponao.
47:5 Ary i Farao dia niteny tamin’i Josefa ka nanao hoe: Ny rainao sy ny rahalahinao efa tonga aty aminao;
47:6 ny tany Egypta dia eo anoloanao; koa amin’izay tany tsara indrindra no amponeno ny rainao sy ny rahalahinao; aoka honina ao amin’ny tany Gosena izy ary raha fantatrao fa misy lehilahy mahay eo aminy, tendreo izy ho lehiben’ny mpiandry ny omby aman’ondriko.
47:7 Dia nentin’i Josefa ho eo anatrehan’i Farao i Jakoba rainy; ary i Jakoba dia nisaotra an’i Farao.
47:8 Ary hoy i Farao tamin’i Jakoba: Firy taona moa no andro niainanao?
47:9 Dia hoy i Jakoba tamin’i Farao: Telopolo amby zato taona no andro nivahiniako; sady vitsy no ratsy ny andro niainako ka tsy nahatratra ny Dia hoy i Jakoba tamin’i Farao: Telopolo amby zato taona no andro nivahiniako; sady vitsy no ratsy ny andro niainako ka tsy nahatratra ny andro niainan’ny razako tamin’ny andro nivahiniany.
47:10 Ary i Jakoba, rehefa nisaotra an’i Farao, dia lasa niala teo anatrehany.
47:11 Dia namponenin’i Josefa ny rainy sy ny rahalahiny ka nomeny zaratany tao amin’ny tany Egypta, dia tao amin’ny tany tsara indrindra, tao amin’ny tany Ramesesa, araka izay efa nandidian’i Farao.
47:12 Dia novelomin’i Josefa tamin’ny hanina ny rainy sy ny rahalahiny mbamin’ny ankohonan’ny rainy rehetra, araka ny isan’ny zanany avy.
47:13 Ary tsy nisy hanina teo amin’ny tany rehetra; fa mafy indrindra ny mosary, ka efa reraka ny tany Egypta sy ny tany Kanana noho ny mosary.
47:14 Dia nangonin’i Josefa ny vola rehetra izay hita tany amin’ny tany Egypta sy tany amin’ny tany Kanana, dia izay vidin’ny vary novidin’ny olona, ka nampidirin’i Josefa tao an-tranon’i Farao ny vola.
47:15 Ary rehefa lany avokoa ny vola tany amin’ny tany Egypta sy tany amin’ny tany Kanana, dia nankeo amin’i Josefa ny Egyptiana rehetra ka nanao hoe: Omeo hanina izahay; fa nahoana no dia ho faty eto anatrehanao izahay? Fa efa lany avokoa ny vola.
47:16 Ary hoy kosa i Josefa: Omeo ny omby aman’ondrinareo hotakalozako, raha lany ny vola.
47:17 Dia nentiny tany amin’i Josefa ny omby aman’ondriny, ka notakalozan’i Josefa hanina ny soavaliny sy ny ondry aman’osiny ary ny ombiny sy ny borikiny; dia nomeny hanina izy tamin’izany taona izany ho takalon’ny bibiny rehetra.
47:18 Ary rehefa tapitra izany taona izany, dia nankeo aminy indray ny olona tamin’ny taona faharoa ka nanao taminy hoe: Tsy azonay afenina amin’itompokolahy fa efa lany ny vola, ary efa lasan’itompokolahy avokoa ny biby fiompy; tsy misy na inona na inona intsony eto imason’itompokolahy afa-tsy ny tenanay sy ny taninay;
47:19 nahoana no dia ho faty izahay eto anatrehanao, dia izahay sy ny taninay? Takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay, dia ho mpanompon’i Farao izahay sy ny taninay: ary omeo voa hafafy izahay, mba ho velona, fa tsy ho faty, ary mba tsy ho lao ny tany.
47:20 Dia notakalozan’i Josefa ho an’i Farao ny tany Egypta rehetra; fa ny Egyptiana samy nanakalo ny sahany avy, satria resy mosary izy; ary dia lasan’i Farao ny tany.
47:21 Ary ny olona dia nafindrany ho ao amin’ny tanana hatramin’ny faran’ny faritr’i Egypta rehetra.
47:22 Ny tanin’ny mpisorona ihany no tsy mba natakalony; fa nanana anjara tamin’i Farao ny mpisorona ka nihinana ny anjara izay nomen’i Farao azy; izany no tsy nanakalozany ny taniny.
47:23 Dia hoy i Josefa tamin’ny olona: Indro, efa voavidiko androany ianareo sy ny taninareo ho an’i Farao; koa indreny ny voa hafafinareo, dia hofafazanareo ny tany.
47:24 Ary rehefa misy vokatra, dia haterinareo ho an’i Farao ny ampahadiminy; ary ho anareo kosa ny efa-toko, ho voa hafafy any an-tsaha sy hohaninareo mbamin’izay ao an-tranonareo ary hohanin’ny zanakareo.
47:25 Ary hoy izy: Efa namonjy ny ainay ianao; aoka mba hahita fitia eto imason’itompokolahy izahay, dia ho mpanompon’i Farao.
47:26 Dia nataon’i Josefa ho lalana tany amin’ny tany Egypta mandraka androany izany; fa ho an’i Farao ny ampahadiminy; fa ny tanin’ny mpisorona ihany no tsy mba lasan’i Farao.
47:27 Ary nonina tao amin’ny tany Egypta i Israely, dia tao amin’ny tany Gosena; ary nahazo zaratany tao izy, dia nihamaro anaka ka nihabetsaka indrindra.
47:28 Ary ny andro niainan’i Jakoba tao amin’ny tany Egypta dia fito ambin’ny folo taona; koa ny andro rehetra niainan’i Jakoba dia fito amby efapolo amby zato taona.
47:29 Ary rehefa antomotra ny andro hahafatesan’i Israely, dia nampaka an’i Josefa zanany izy ka nanao taminy hoe: Raha mba nahita fitia eo imasonao aho, masina ianao, ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao, ka ataovy amiko izay soa sy izay marina; masina ianao aza alevina aty Egypta aho.
47:30 Fa rehefa lasa mody mandry any amin’ny razako aho, dia hoentinao hiala aty Egypta ka halevinao ao amin’ny fasany. Dia hoy i Josefa: Hanao araka ny teninao aho.
47:31 Ary hoy i Jakoba: Mianiana ary amiko. Dia nianiana taminy izy. Dia niankohoka teo an-dohan’ny farafara i Israely.